Weerarkii Hotel Afrik oo la soo afjaray iyo khasaaraha oo la faah faahiyay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Weerarkii Hotel Afrik oo la soo afjaray iyo khasaaraha oo la faah...
Weerarkii Hotel Afrik oo la soo afjaray iyo khasaaraha oo la faah faahiyay
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay in la soo afjaray weerarkii saacadaha badan qaatay, ee Shabaabku ku qaadeen Hotel Afrik ee Magaalada Muqdisho.
Weerarkan ayaa ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu dhuftay albaabka hore ee hotelka, waxaana xigay dabley hubeysan oo gudaha u galay hotelkaasi, kuwaa oo sideed saacadood ka dhex dagaalamayay.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Dhamme Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) ayaa sheegay in weerarka uu bilowday abaare 5-tii galabnimo ee maanta, ka dib markii kooxaha argagixisada gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ay u isticmaaleen buu yiri naftii hallige inuu qaribo naftiisa iyo midda shacabka.
Afhayeenka Ciidanka Booliska oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhimashada ay tahay sagaal qof iyo dhaawaca toban kale.
“Inta la xaqiijiyay waxaa weeye dhimashada illaa sagaal qof iyo dhaawaca illaa toboneeyo qof ah, oo dhammaantood ay goobta wax ku wada gaareen.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Afhayeenka ayaa xusay in sagaalka qof ee dhintay ay afar ka mida yihiin maleeshiyadii weerarka soo qaaday, midkii isku qarxiyay ilinka hore ee hotelka iyo saddex kale oo hotelka ka dhex dagaalamayay, oo markii dambe ay ciidamada dileen, sida uu yiri.
Doodisho ayaa intaa ku daray in dhimashada iyo dhaawacuba uu kordhi karo, balse inta la xaqiijiyay ay hadda tahay tiradaasi.
Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda weerarka abaabulan ee lagu ekeeyay Hotel Afrik.
Weerarkan ayaa noqonaya kiisii ugu horeeyay ee Caasimadda Muqdisho ka dhaca wax ka yar lix bilood. Weerarkan kii ka horeeyay waa midkii ay Shabaabku ku bartilmaameedsadeen Hotel Elite, 16-kii bishii August.
Previous articleRooble oo ka hadlay weerarkii Hotel Afrik iyo geerida General Galaal
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo ka hadlay geerida General Galaal